250W 500W Mmiri mmiri IP65 DMX RGB ma ọ bụ na LWW-10 LED mgbidi wereher,Mgba ọkụ Na-acha ọkụ,Guzheng Town Led Home Decorative,Guangdong Led Home Decorative - China 250W 500W Mmiri mmiri IP65 DMX RGB ma ọ bụ na LWW-10 LED mgbidi wereher, Emepụta & ndozi
250W 500W Mmiri mmiri IP65 DMX RGB ma ọ bụ na LWW-10 LED mgbidi wereher. Ọkụ na-acha ọkụ. Ihe ọhụrụ na-adọrọ mmasị na oghere ntụrụndụ na-enwe mmetụta dị mma bụ ọkụ Wall Washer, nke na-eme ka obi dị jụụ, na-enye nchebe azụ dị jụụ. A pụkwara iji ya mee ihe na mpaghara dị warara karị maka mmetụta dị ịrịba ama, karịsịa mgbe a na-ejikọta ọtụtụ ma ọ bụ iji kpuchie ebe buru ibu na mmetụta siri ike. A na-eji mgbidi windo anyị na-acha ọkụ eme ihe maka mma na ịkọwa ụlọ ma ọ bụ ubi. Anyị na-agụnye ndị na-agbanwe agba agba na-emepụta ọtụtụ agba, dịka ịmepụta ọkụ, ụda ma ọ bụ static.It nwere ike ịrụ ọrụ na ọnọdụ onwe ya na ụdị DMX, nke nwere ike ịmepụta mgbanwe dị iche iche na-agbanwe agbanwe, dịka ịmị ọkụ, ịgba ọsọ, DMX 256 na ọkwa gọọmentị ogo dimmer, DMX nke nwere ike ịmepụta (ọtụtụ puku mmetụta dị na ya ma ọ bụrụ na ọtụtụ ọkụ ejikọrọ ọnụ) .Ndị njikwa nke ìhè anyị: Ọnọdụ onwe onye / Master / Slave mode / DMX / RGB ma ọ bụ Steady( 250W 500W Mmiri mmiri IP65 DMX RGB ma ọ bụ na LWW-10 LED mgbidi wereher )
250W 500W Mmiri mmiri IP65 DMX RGB ma ọ bụ na LWW-10 LED mgbidi wereher
©2005-2018 Karnar Kpọtụrụ anyị Map ebe Last modified: August 24 2019 03:38:42.